VIDEO: Meyman oo afar sano kaddib markii ugu horreeyey matala xulka qaranka Soomaaliya… (Muxuuse ka yiri?) – Gool FM
VIDEO: Meyman oo afar sano kaddib markii ugu horreeyey matala xulka qaranka Soomaaliya… (Muxuuse ka yiri?)
Haaruun July 20, 2019
(Muqdisho) 20 Luulyo 2019. Xiddiga kooxda kubadda cagta Horseed ee Maxamuud Cabdi Nuur (Meyman) ayaa muddo dheer kaddib qaranka looga yeeray isagoo iminka ka mid ah xiddigaha matalaya xulka qaranka Soomaaliya ee tartanka Chan Cup.
Laacibkan ayaa ugu dambeysay inuu xirto maaliyadda qaranka sanadkii 2015-kii markaas oo xulka ka qeyb galayay tartanka Cecafa oo ka dhacaay waddanka Ethiopia, taa oo ka dhigan in mudo afar sano uusan xiran maaliyadda xulka, balse sanadkan nasiib u yeeshay inuu ka qeyb noqdo xiddigaha xulka qaranka ee ka qeyb galaya tartanka Chan Cup.
Meyman ayaa ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan ee ka ciyaara horyaalka Somali Premier League, isagoo u soo ciyaaray kooxo badan sida Jeenyo, Elman iyo Horseed oo iminka qeyb ka yahay laacibkan.
Xulka qarankan ayaa sanadkan qeyb ka ah xulalka ka qeyb galaya tartanka Chan Cup oo caadiyan ay ciyaaran xiddigaha horyaalladooda ka dheela, waxayna la dheeli doonaan ciyaar labo waji leh xulka Uganda oo isana qeyb ka ah xulalka ka qeyb galaya koobkan.
Kulanka ugu horreyea ayaa lagu wada inuu ka dhaca Wadanka Jabuuti oo guri ahaan ay ugu ciyaarayan xulkeenna qaranka taariikhdu marka ay ku beegan tahay 27-ka bishan, halka kulanka lugta labaad uu ka dhici doona Wadanka Uganda.
Kaddib markii uu ogaaday inuu qeyb ka yahay xiddigaha matalaya xulka sanadkan Mayman waxa uu ka hadlay dareenkiisa ku aaddan inuu dib u soo laabashada uu sameyay ee muuqaalka hoose ka daawo.
Waxaana warbixintaan inoo diyaariyey C/fitaax C/rashiid Abuukar (Nani).
Niko Kovač oo ka hadlay wararka xanta ah ee la xiriirinaya Gareth Bale suurtogalnimada uu ugu biiri karo Bayern Munich
KASHIFAAD - Waa Kuma xiddigii ugu adkaa abid ee uu garoonka ku wajahay Antoine Griezmann??